ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းမှ မျောလာသည့် ထင်းများကို ရွှေဘိုနယ်မှ စဉ့်လုပ်ငန်းရှင်များ ဝယ်ယူ စုေ?? - Yangon Media Group
ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းမှ မျောလာသည့် ထင်းများကို ရွှေဘိုနယ်မှ စဉ့်လုပ်ငန်းရှင်များ ဝယ်ယူ စုေ??
ရွှေဘို၊ ဇူလိုင် ၂၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရွှေဘို မြို့အရှေ့ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိ စဉ့်ထည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်မီးဖိုကြီးများမှ လောင်စာသုံး ထင်းများကို ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်ချိန်တွင် ဝယ် ယူစုဆောင်းကြရရာ ယခုရက်ပိုင်းမြစ်ရေတက်ချိန် တွင် နွယ်ငြိမ်းအနီးဆိပ်ကမ်းသို့လာရောက် ရောင်း ချသည့်ရေမျောထင်းတင်လှေများ အရောင်းတွင် ကျယ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
စဉ့်ထည်ပစ္စည်းများကို ရွှေဘိုမြို့နယ် ကျောက် မြောင်းမြို့အောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိ နွယ်ငြိမ်း၊ ရွှေတိုက်၊ ရွှေဂွန်နှင့် မလားရွာများ၌ စဉ့် ဖုတ်မီးဖိုကြီးများတည်၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်လုပ် ကြပြီး စဉ့်ထည်များဖုတ်ရာတွင် မြစ်ရေကြီးချိန်၌ ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်းမှမျောလာသည့် ရေမျော ဝါး၊ ထင်းများအားဝယ်ယူစုဆောင်းသိုလှောင်၍ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အသုံးပြုကြရသည်။
”စဉ့်ဖိုတိုင်းရေမျောထင်းပဲ အားကိုးကြရတာ ပါ။ ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်း ဗန်းမော်၊ ကသာ၊ ထီးချိုင့်နယ်သစ်တောများက ကိုင်းဖျားကိုင်းနား စွန့်ပစ်သစ်တုံးတွေ သဘာဝအလျောက်ကျိုးကျပျက် စီးသွားတဲ့ သစ်ပင်ဝါးပင်အကိုင်းအခက်တွေ မဲဇာ၊ ရွှေလီနဲ့ မြစ်ချောင်းငယ်တွေက ဧရာဝတီမြစ်ထဲ မျောပါလာတဲ့ထင်းတွေပါ။ အသုံးမတည့်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စဉ့်ဖိုတွေကျတော့ အသုံးတည့်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသုံးနိုင်အောင်ကတော့ ဒီအချိန်မှာ ဝယ်ယူစုဆောင်းကြတာပါ”ဟု စဉ့်ထည်ပစ္စည်းလုပ် ငန်းမှ ဦးတင့်က ပြောကြားသည်။
ရွှေဘိုနယ်တွင် စဉ့်ထည်ပစ္စည်းများကိုဖိုတည် ထုတ်လုပ်သူ ၂၈ ဦးရှိရာ ကိုးဦးမှာ ဖိုကြီးများတည် ထုတ်လုပ်ပြီး ဖိုကြီးများမှ စဉ့်အိုးကြီးများဖုတ်ရာ တွင် တစ်ကြိမ်လျှင် ရေမျောထင်းလှည်း ၂ဝ တိုက် လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုကြရကြောင်း သိရသည်။ နွယ်ငြိမ်းဆိပ်ကမ်းတွင် ရေမျောထင်းများကို စက်လှေများ၊ ရွက်တိုက်လှေများနှင့် ဖောင်တွဲများ ဖြင့်လာရောက်အရောင်းအဝယ်ပြုရာတွင် လှည်း တစ်စည်းတိုက်စာ ဈေးသတ်မှတ်ဝယ်ယူရောင်းချ ကြပြီး ယခုရက်ပိုင်းထင်းလှည်းတစ်စည်းစာ ရောင်း ဈေးမှာ ကျပ် ၆၅ဝဝ မှ ၇ဝဝဝ အထိရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘီးလင်းမြို့နယ် အတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှု များကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများ၌ ဒေသခံပြည်သူ ၂၇ဝဝ ကေ?
သြစတြေးလျ အင်အားကြီး မီဒီယာ လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသော Fairfax နှင့် Nine တို့ လုပ်ငန်းချင်း ပူးပေါင်း
ရေနံချောင်းမြို့နယ် အတွင်း ရွာနှစ်ရွာ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားရာမှ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစဉ် စက်လှေမှောက်၊ ရှစ်ဦးသေဆုံး၊ ၂၉ ဦး ပျောက်ဆုံးနေ
မြဝတီမြို့တွင် အမှိုက်တန်ချိန် ၆ဝ ခန့် နေ့စဉ် ပစ်နေသည့် စည်ပင်သာယာ အမှိုက်ပုံ မီးလောင်မှုဖြစ်?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တီဘီဖြစ်ပွားသူ ငါးသောင်းခန့်ကို ရှာဖွေကုသပေးရန် နှစ်စဉ် ကျန်ရှိနေ
ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွင်း ယဉ်ကျေးမှု အကများအပြင် ရိုးရာအစားအစာနှင့် အမှတ??
Globe Soccer Award ၏ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို စီရော်နယ်ဒို ငါးကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူး